Akaakuu barrefamaa hedduu fakaafama ykn pirezantetionii dhiheessa waan tokkotti ida'uu ni dandessa:
Barrefama maqaanii keessaa
Barrefama hammantaa guutuuf barrefama amla hammantaa jijjiru
Barrefama wanta fakaafaman hundarratti calama olqaasuun dabalamu
Barrefama galmee barreessaa irraa garagalfame
Barreeffama barreeffama irraa saagamu yookiin kan galmee HTML
Maqaanii Barrefamaa Ida'uu
Barruusajoo Cuqaasii qaree hantuutee gara essatti sochoosi.
Maqaanii barrefama gara hammamtaa galmee kee keessaa barbaaddetti harkisi.
Barrefama kee barrefama maqaanii keessatti barreessi yookin maxxansi.
Barrefama gulaaluuf,yookiin amaloota dhangii barreffama kanneen aka bocquu hammamta ykn bocquu haallu lama cuqaasii.amaloota wanta kanneen akka haalluu daangaa ykn fulduraa yookiin duubaa wantoota biroo gulaaluuf daangaa barrefama wantaa cuqaasi.
Barrefama maqaaniif mijeessuu
Akka sadarkaa armaan olii keessatti ibsametti maqaanii barrefamaa uumi.
Barrefama wantaa waliin filatamee Dhangii - Barruu fili. Qaaqni Barruu ni banama.
Fuula caancaala Barrefamairraa sanduuqa mirkanessabarrefamaaf dheerina toluqulqullessi,itti aansuun sanduqa mirkanessaa maqaaniidhaaf kan tolu fili.TOLECuqaasi.
Amma hammamtaa jijjiiruuf sanduuqa barruu irra deebitee hagamtaa fi boca arfiilee barruu jijjiiruu dandeessa.
Barrefama Caatoo waliin Hidhata qabu
Erga caatoo lama cuuqaastee,barrefama caatooo barbaaddetti dabaluu nii dandessa.
Iddoo barrefamaa adda baasuuf ,iddoo ka'uumsaaDhangi-barrefama keessaa fayyadami.
Fakkenyaaf, xiyya Balballootasajoo kamshaa ajaja banuuf cuqaasi.
Ajaja filachuun qaree hantutee gara ajaj jalqabu barabaaddetti sochosi.
Ajaja fakaasuuf harkisi.
Barrefama galmee barreessaa kee keessaa filadhu.
Barreeffama qadhabaa waraqaatti gargalachuuf (Gulaali-Jalatessii.
Fuula ykn islaayidii, bakka barruu itti maxaansuuf barbaaddu cuqaasi.
Gulaali-MaxxansaayookiinGulaali-Maxxansaaddaafayyaddamuun barreeffama maxxansi.
Maxxansa addaa fayyaddamuun,dhangii barreffamaa maxxanfamee filachuu ni dandeessa. Dhangiicharratti hundaa'uun, amaloota barreeffama garagaraa garaglchuuni dandeessa.
Fuula yookiin islaayidii bakka barreeffama alaaguu barbaaddeetti cuqaasi.
Faayila barreffamaa (*.txt)yookiin HTML filadhuuti, Saagi cuqaasi. Qaaqni Barruu Saagi saaguuf TOLE cuqaasi.
Title is: Barrefama Ida'uu